हृदयश र बृजेशले किन गरे एमालेसँग सौदाबाजी? - हिमाल दैनिक
राजपा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका त्रिपाठी र गुप्ता निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनबाट त्रसित!
१७ आश्विन २०७४, मंगलवार ११:२८
बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना कालदेखि नै तराई मधेस केन्द्रीत सदभावना पार्टीको राजनीतिमा अग्रस्थानमा रहँदै आएका हृदयश त्रिपाठी दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)मा सक्रिय रहेका थिए।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिको छायाँमा पर्न पुगेका त्रिपाठी पछिल्लो समय ६ वटा मधेसवादी दलहरुबीचको एकिकरण पश्चात गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र यसको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
राजपा गठन प्रक्रिया र त्यसको अध्यक्ष मण्डल गठनमा कुनै हैसियतबीनाका व्यक्तिहरु आफूभन्दामाथि मर्यादाक्रममा राखिएपछि उनी नयाँ पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित समेत हुन चाहेनन्।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको पार्टी नेतृत्व जब तेस्रो चरणमा सम्पन्न दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय लियो यसले नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहदै आएका त्रिपाठीलाई थप आक्रासित बनायो।
त्यसमाथि पनि नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको क्रममा भएको सीमांकनले आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पारी आफ्नो राजनीतिक भविश्य खतरामा पर्ने संकेत त्रिपाठी पाइसकेका थिए। जसको कारण नेता बृजेशकुमार गुप्ता लगायत ५ जनालाई साथ लिएर त्रिपाठीले सोमबार एकाएक एमालेसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी आसन्न निर्वाचनमा एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमति गरे।
यसले मधेसी दलभित्र मात्र होइन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ तरंग उत्पन्न गराएको छ। यसै प्रसंगमा हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले त्रिपाठीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादीत अंशः
लामो समयदेखि तराई मधेसको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा सक्रिय तपाई लगायत केही नेताहरुले एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने निर्णय गर्नु भयो। के तपाईहरुले अब राजपा अथवा मधेस केन्द्रीत राजनीति छोडेकै हो?
हामीले एमालेसँग उसको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने सहमति केबल आसन्न निर्वाचनका लागि भएको चुनावी गठबन्धन र तालमेल मात्रै हो। एमालेसँगको चुनावी तालमेल र गठबन्धनले तराइ मधेसको राजनीतिमा हिजो जुन सक्रियता थियो, त्यसमा कुनै कमि आउदैन। यसको अर्थ हामीले राजपा छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेको पनि होइन।
चुनावी गठबन्धन र तालमेलको निर्णय पार्टीले नगरी तपाई केही नेताहरुले मात्रै गर्नु भयो भने यसलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने?
मैले पहिले नै भने, हामीले मधेसको राजनीति छाडेर एमा#लेमा प्रवेश गरेको होइन। जहाँसम्म पार्टी नेतृत्वको निर्णयको सवाल छ, राजपाको वर्तमान नेतृत्वमा रहेका साथीहरुले पश्चिम तराइको विषयमा कहिल्यै सोच्न सक्नु भएन। उहाँहरुको ध्यान केबल दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै केन्द्रीत हुन पुग्यो र अरु ठाउँमा पुग्न सक्ेन। उहाँहरुले जनाधार भएका साथीहरुको विषयमा सोच्नै सक्नु भएन। त्यसैले यस्तो स्थिती आएको हो।
एकातिर पार्टीले आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने अर्को तर्फ तपाइहरु एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने कुराले पार्टीभित्र असहजताको स्थिती आउँदैन र?
होइन, यो केबल चुनावी तालमेल र गठबन्धनको विषय हो। यसलाई बाबुराम भट्टराई जीले जसरी संघीय समाजवादी फोरम अथवा अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु भयो, त्यसैगरी हामीबीच भएको सहमति अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ। हिँजो भएको सहमति अनुसार, हामी चुनाव लडेको ठाउँमा एमालेले उम्मेदवार दिँदैन र एमालेका उम्मेदवार भएको स्थानमा हामीले उम्मेदवारी दिँदैनौं। यसरी भट्टराईजीले अर्को दलको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेजस्तै हामीले पनि एमालेको चिन्ह लिएर चुनावमा जाने निर्णय लिएका हौं।
तपाईहरुले संस्थागत रुपमा नभई व्यक्तिगत रुपमा गरेको सहमतिलाई तपाईहरुका मतदाताले कसरी लेलान जस्तो लाग्छ?
यो हाम्रो समूहले गरेको चुनावी तालमेल हो। यो तालमेल जुन ढंगले भएको छ त्यसबाट हाम्रो क्षेत्रका मतदाता खुशी नै हुने छन् दुःखी हुनु पर्ने कारण छैन।
तपाईहरुले पार्टी निर्णय विना नै लिएको निर्णय पार्टीले नमानेर आफ्नै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?
हामीले गरेको निर्णय पार्टीले कसरी लेला भन्ने इस्यू नै होइन। यदि पार्टीले यसलाई अस्विकार गर्दै आफ्नै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दियो भने पनि यसमा कुनै चिन्ताको विषय रहदैन।
यो बीचको समयमा पार्टी नेतृत्वलाई अरु ठाउँमा पनि चुनावी तालमेल र गठबन्धनको लागि सुझाव र दबाब दिने कार्य गर्नु हुन्छ कि?
म जुन बेलासम्म पार्टी नेतृत्वलाई यो गरौ त्यो गरौ भनी सुझाव र सल्लाह दिने गर्थे त्यो अवस्था अहिले छैन्। अरु ठाउँमा यसो गरौ उसो गरौ भनि मनाउन अहिले म लागेको पनि छैन र त्यो कुरा सुन्न सुनाउन लायक मानिस नै छैनन् भने किन त्यता लाग्ने?
तपाइहरुको यो निर्णय कतै नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तपाइहरुको जिल्ला उत्तर दक्षिण सीमांकन गरेको कारण चुनाव जित्न एमालेसँग सहमति गर्नु भएको हो कि?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार हेर्ने हो भने यसमा कुनै वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधारमा गरिएकै छैन्। यो त केबल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अनूकुलता अनुसार बनाएको छ। यसमा जनसंख्या, भूगोल र अन्य व्यवहारिक पक्ष मिलाएर गरेकै छैन्। त्यसैले पनि हामी एमालेसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जान बाध्य भएका हौं।
संविधानमा मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा जुन दल अत्यन्त अनुदार रह्यो र उसैको कारण संविधान संशोधन विधेयक पनि फेल भयो, अहिले त्यहि दलको चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जाँदा यसको अर्थ के लाग्ला?
मधेस र मधेसी जनताको अधिकारको विषयमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा कुनै फरक छैन्। यो विषयमा अहिले कुनैलाई माया गर्नु पर्ने र अर्कोलाई घृणा गर्नु पर्ने अवस्था पनि छैन्। संविधान जारी गर्दादेखि नै यी तीन दल मधेसको मुद्दामा एकै स्थानमा छन्। संविधान जारी गर्दा सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो। उसले पनि मधेसको विषयमा गम्भिरता देखाएन। एमाले र माओवादीले पनि मधेसकोबारेमा कुनै उदारता देखाएनन्। खाली हतारमा संविधान पारित गर्न मात्रै केन्द्रीत रहे।
संविधान संशोधनको विषयमा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव ल्यायो। तर त्यसलाई पारित गराउने विषयमा गम्भिरताकासाथ कुनै गृहकार्य हुन सकेन। पछि कांग्रेसको नेतृत्व सरकारले प्रस्ताव निर्णय प्रक्रियामा लग्दा पनि गम्भिरता देखाएन। जुन सरकार गठनको पक्षमा ३ सय ८८ मत परेको थियो त्यहि मतसहित प्रस्ताव पारित गराउनेगरी कुनै गृहकार्य गरिएन। एमालेको त विरोध नै रह्यो। अरु पक्षलाई समेटी आवश्यक दुई तिहाई मत जुटाएर पारित गर्ने भन्दा पनि खेलाँचीमा विधेयक अघि बढाइयो। त्यो पनि पारित नहुने अवस्थामा मात्रै अगाडि बढाइयो। अहिले हामीले एमालेसँग गरेको सहमति पश्चात एमालेको सोचाइमा केही परिवर्तन आउँछ कि भन्ने विश्वास लिएका छौ र यसले मधेसको विषयमा अरुलाई पनि प्रभावित गर्छ कि भन्ने लागेको छ।
एमाले र माओवादीबीच हिँजैबाट नयाँ गठबन्धन र एकिकरणको कुरा आएको छ। यदि त्यो कुरा भयो भने तपाईहरुसँग भएको व्यक्तिगत सहमति प्रभावित हुँदैन?
हाम्रो समूहले एमालेसँग राजनीतिक विश्वासका आधारमा गठबन्धन र तालमेल गरेको हो। यहिबीचमा एमाले र माओवादी पार्टीबीचको तालमेल र गठबन्धन र एकिकरणको कुरा पनि आएको छ। यसले हामीसँगको सहमतिमा असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि यस्तो भयो भने त्यो राजनीतिक धोका हुन्छ, जुन राजनीतिमा एक पटकका लागि मात्रै हुँदैन।
तपाईहरुको यो निर्णय मधेसवादी दलहरुबीचको गठबन्धन पश्चात बनेको राजपा र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आक्रोसको परिणाम होइन र?
हामीले मधेसी मोर्चालाई मिलाउने विषयमा पार्टीभित्र त्याग गर्दै आएका हौं। यतिसम्म कि, तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जसको एउटा आफ्नै पहिचान र अस्थित्व रहेको थियो, त्यसलाई त्याग्न पनि हामी तयार भयौं र अहिलेको राजपा बन्यो। तर जुन उद्देश्यले राजपाको गठन भयो, त्यो उद्देश्य बमोजिम नेतृत्वले गति लिन पनि सकेन। उसले लामो समयसम्म पार्टीको विधान बनाउन र दल दर्ता गर्नसम्म पनि सकेन। नेतृत्वमा रहेका साथीहरुको कुनै दीर्घकालिन सोच नै छैन। उहाँहरु एउटा चुनावमा भाग नलिएर बहिष्कार गर्ने र अर्कोतिरको चुनावमा भाग लिने जस्तो केटाकेटी पाराको निर्णय गर्नु हुन्छ भने यसलाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ?
Prevपछिल्लोलस भेगासमा भएको गोलीकाण्डमा ५० जना मारिए, २०० घाइते
अघिल्लोप्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच वार्ताNext